"Aiza ireny andriamanitrao izay nataonao ho anao ? Aoka hitsanganaireny, raha mahavonjy anao amin’ny andro fahorianao!" Jeremia 2:28
"Ny Filazantsara … [dia] herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino." Romana 1:16
Izao no tantarain’I Henri Heine, poety alemana: Nitsidika ny tranombakoka ao Louvre (any Frantsa) izy teo amin’ny faraparanan’ny andro niainany, dia nipetraka bory Tanana, sarivongana nataon’I Milo. Narary sy kivy tanteraka izy tamin’izay, nieritreritra ny fiainany simbasimba foana sy ny fahafatesana miandry azy. “Teo aho hoy ny nosoatany nokekerin’ny nenina sy nitomany fatratra, ihany ka na vato aza dia ho nangoraka. Teo anoloako nefa ilay andriamanibavy dia toa mijery ahy sy miteny amiko hoe: Ts hitanao angaha fa bory tànana aho ary tsy afaka mamonjy anao?”
Sampy bory Tanana! Izany tokoa no sariohatr’izao tontolo izao: tsy afaka manarina sy manampy ireo olona no simbany tena sy fanahy.
Mila tiavina ny olona.aiza no hahitany fiombonam-po tena izy? Tsy ho ao amina tontolo feno fitiavana, ikatsahan’ny tsirairay ny tombontsoany manokana, fa ao anatin’ny fon’Andriamanitra irery ihany. Tia antsika mantsy Andriamanitra; izany no hafatra voalohany ambaran’ny Filazantsara.
Saingy, na lehibe toa inona aza anefa izany fanambarana izany, dia tsy ampy antsika. Mila famonjena koa ny olona. Mila hery ivelan’ny tenany, afaka manala azy amin’ny toe-panahy faran’izay mahantra misy azy, amin’ny fangejan’ny ota, ary amin’ny fatahorana ny fahafatesana. Ary ao amin’io Andriamanitra Mpamonjy Mpamonjy io ihany no ahitany izany hery izany. Mbola miteny amintsika Jesosy hoe: “Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mivesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana” (Matio 11:28).